Ra'iisalwasaaraha cusub waa nin caynkee ah? - BBC Somali
Ra'iisalwasaaraha cusub waa nin caynkee ah?
13 Disembar 2013
Madaxweynaha Soomaaliya aya Cabdiweli Sheekh Axmed u magacaabay jagada ra'iisalwasaaraha Soomaaliya. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u codeyn doono Cabdiweli. Marka, Cabdiweli waa nin caynkee ah. Cabdirisaaq Catoosh ayaa ka wareystay Aadan Ibraahim Aw Xirsi,oo aad u garanayo Cabdiweli.